मुक्तिनाथ विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ साउन २०७२) | गृहपृष्ठ
Home लगानी मुक्तिनाथ विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ साउन २०७२)
on: २४ श्रावण २०७२, आईतवार ००:०० लगानी
मुक्तिनाथ विकास बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २४ साउन २०७२)
बैङ्कको २०७१/७२ आवको चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ५५ दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेको छ । बैङ्कले गत आवको नाफाबाट चुक्तापूँजीको साढे २९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नसक्ने क्षमता देखिन्छ । जगेडा सञ्चितीले भने यो क्षमतामा फरक पर्न सक्छ ।
– मैनबत्ती विश्लेषण गर्दा अन्तिम दिनमा सेतो लामो मारुबोजु बनेको छ । यसले आगामी दिनमा पनि शेयरमूल्य बढ्रनसक्ने सम्भावना देखाउँछ । आरएसआई ओभर शोल्ड जोन (२८ दशमलव ८७ स्केल)मा छ । स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ७ दशमलव ४६ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : ५० दिने औसत मूल्य रेखा र २१ दिने औसत मूल्य रेखा एकअर्कासँग टाढिँदै गएका छन् । २१ दिने मूल्य रेखाले ५० दिने रेखालाई काटेर तल झरेमा आगामी दिनमा मूल्य घट्नसक्छ । ५० दिने रेखामा टेवा पाएर फर्किएमा मूल्य बढ्छ । हालको बिन्दुबाट मूल्य सस्तिएमा रू. ६ सयमा टेवा पाउने देखिन्छ । मूल्य महँगिएमा रू. ६ सय २२ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।
कम्पनीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार २०७१/७२ आर्थिक वर्ष र २०७०/७१ आर्थिक वर्षबीच तुलना गर्दा :
– अन्तिम त्रैमासमा खुद नाफा रू. २३ करोड ६७ लाख रहेको छ । ६० दशमलव १८ प्रतिशत सञ्चालन मुनाफा र ५७ दशमलव ७७ प्रतिशत खुद ब्याज आम्दानी बढेपछि खुद नाफा बढ्नमा टेवा पुगेको होे ।
– कर्मचारी खर्च ५८ दशमलव ५२ प्रतिशत, अन्य सञ्चालन आम्दानी ३७ दशमलव ५० प्रतिशत र कुल सञ्चालन आम्दानी ५२ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेको छ ।
– ब्याज आम्दानी ४५ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेर रू. ८९ करोड ४० लाख र ब्याज खर्च ३१ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर रू. ३७ करोड ८४ लाख पुगेको छ ।
– चुक्ता पूँजीको तुलनामा खुद नाफा ४१ दशमलव ३६ प्रतिशतबाट घटेर ३६ दशमलव ९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
– रू. ७ अर्ब ७८ करोड कुल निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ६ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । लगानी ५७ दशमलव १८ प्रतिशतले बढेर रू. १० करोड ३३ लाख पुगेको छ ।
– बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र सीडी रेशियो शून्य दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ ।
– बैङ्कको तरलता अनुपात २७ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको चौथो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख भएअनुसार पीई रेशियो १५ गुणा छ । गत असार मसान्तसम्म विगत १२ महीनाको आम्दानीका आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३७ छ । सो आम्दानी र शेयरको पछिल्लो कारोबार मूल्यका आधारमा निकालिएको पीई रेशियो साढे १६ गुणा छ । हालको शेयरमूल्य नेटवर्थको करीब ४ गुणा छ ।